သတင်းဒူး do | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » သတင်းဒူး do
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jul 3, 2013 in Aha! Jokes, Satire, Myanma News | 14 comments
အမေရိကန် ခရီးစဉ်တွင် အန်အယ်ဒီနှင့် ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့မည်ဟု ၎င်းနာမည်အတုဖြင့် အခြားတယောက်မှ အင်ထုသွားဂဲ့၍ ယူအက်စ်တရားရုံးတွင် အမည်မူပိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်ငှက်ကထဂျီး ဦးရွှေမန်းမှ ယနေ့ပေါကျားသည်။
ဒုတိယ သမတ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး အနားယူပြီးနောက် မကျင်းပဖြစ်သော ကာလုံအစည်းအဝေး ခေါ်ယူခြင်းမှာ ခရိုနီဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်တဦးမှ ဖုံတက်နေသည့် အစည်းအဝေးခန်းအား အဆင့်မြင့်ကွန်ဒို ဆောက်ရန် လာရောက် စုံစမ်း၍ဟု ဆိုသည်။
သူမရင်သား ကြီးထွားနေခြင်းမှာ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားခြင်း မဟုတ်ဟု မင်းသမီး နန်းရတီစိုးမှ အခိုင်အမာ ဆိုသဖြင့် ဂျပန်သွားစဉ် နှူးဘာဂိုဏ်းချုပ် မောင်ဂီလက်ချက် မိခဲ့ဖွယ်ရှိသည်။ ဂိုဏ်းချုပ်ဂီဆိုသူမှာ မြန်မာပြည်တွင်ရှိစဉ် အိစက်ညက်ညော ပေါင်မုန့်ဆိုင်၌ ဂျုံနယ်ခဲ့ဖူးဂျောင်းလည်း သိရသည်။
သမဒရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း နှုတ်ထွက်သွားလျင် သူ့နေရာ ဝင်မယူလိုဂျောင်း အမေရိကန်တွင် လျှာပွတ်ဆေး ဖော်၍ မီလျံနာ ဖြစ်နေသူ အဝေးရောက် ဘင်္ဂါလီ အစ္စလာမ်မစ်ကောင်စီ နှာယက အယာတိုလာ မာမွတ်ခိုမ်မှ ကိုဘေးနွားကင်စားလျက် ပြောဆိုသည်။
လင်းဇင်းကုန်း သုဿာန်တွင် မြှုပ်နှံထားသည့် ထိုင်းဘုရင် ကျောက်ဘွား ဒေါက် မဒူးဝါး (ခ) ဥတွန်ပုံ ဆွေတော် မျိုးတော်များအား ရှာဖွနေရာ မြန်မာမှလွဲ၍ အခြားလူမျိုး မဖြစ်ချင်သော သံဖြူဇရပ်ဇာတိသား မွန်ှ-ဗမာကပြား ခွက်ပုန်း အရက်သမား ဖားပြုတ်အောင်ပု ပုန်းအောင်းနေရဂျောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့အရေးတွင် ပြည်သူများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့် တိုင်းတာမှုများ ပြုလုပ်ရန် သမဒဂျီး ဦးသိန်းစိန် ရေဒီယိုမိန့်ခွန်း ပြောအပြီး ပေါင်ချိန်စက်များ ဈေးကျကာ ပိဿလေးဈေး အဆမတန် တက်သွားသည်။
ဘွားဒေါ်ဂျီး သမဒရာထူး ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ပတ်သက်၍ ယခင်ကာလ အချိန်မတူ၍ အရည်အချင်း မပြည့်မှီသော်လဲ ယခုအခါ သဘောတူပြီး အနာဂတ်တွင် တမျိုးပြောင်းနိုင်ဂျောင်း ပြောသွားသော ကြံ့ဖွတ်လဂျီး ဦးဌေးဦးအား အရောင်ပြောင်းတတ်သော ပုတ်သင်ညိုအဖြစ် အများဝေဖန်နေသည်။
အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ လှုံ့ဆော်ရေး လှေလှော်ကစားနည်း ကြော်ငြာအတွက် လှေဝမ်းထဲဝယ် မကြောက်မရွံ့ သရုပ်ဆောင်သော သမီးလေး ရတနာမိုင်အား ရေကူးအတွက်လည်း ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရိုက်ကူးစေလိုဂျောင်း ပုရိသ ပိတ်သက်ကျီး ဆန္ဒပြုသည်။
သမဒရုံးဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက မိမိနားချဉ်ဂျောင်း သံပုရာသီး နားထဲညှစ်လျက် နားနှာခေါင်းလည်ချောင်းဆေးရုံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ထုတ်ဖော် ပေါကျားသီ။
ဇူလိုင်လလယ် သမဒဂျီး ဦးသိန်းစိန် ဗြိတိန်နှင့်ပြင်သစ် သွားမည့်သတင်း ဟုတ်မှန်သော်လည်း အပြန်ခရီးတွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ အက်စ်တာဒမ်မြို့ ကဖေးဆိုင်တခုသို့ ဆေးခြောက်ဝင်ရှုမည် ဆိုဂျင်းအား နာမည်ဖျက်ခြင်း သက်သက်ဟု သမဒရုံး ပေါရေးစိုဂွင့်ရှိသူမှ ပယ်ချလိုက်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများအတွက် ကေအိုင်အို အလုပ်အဖွဲ့ဝင်လေးဦး မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ ရောက်ရှိလာရာ မြန်မာအစိုးရဖက်မှ အပြောအဖွဲ့ဝင် လေးဆယ်ခန့်မှ ကြိုဆိုဂျောင်း မြို့ခံတဦးမှ သတင်းပေးပို့သည်။
ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားကို အင်တာနက်ကုမ္မဏီ ဂူဂဲလ်မှသာ ဖော်ထုတ်နိုင်သကဲ့သို့ ဂေဇက်သဂျီး အယာတိုလာ မာမွတ်ခိုမ် မည်သည့်ဘာသာ ကိုးကွယ်သည်ကို အမေရိကန် စီအိုင်အေ အဖွဲ့မှလွဲ၍ အခြားသူ မသိနိုင်ဂျောင်း ကမ္ဘာ့ဘာသာပေါင်းစုံ ညီလာခံမှ ကြေငြာသည်။
ကွန်မန်ဒိုကြောင်ကြီး စီးနင်းတိုက်ခိုက်မည့် ဝနောက်တန်းတပ်ဖွဲ့
ဝတပ်နှင့် အစိုးရတို့အကြား စစ်ရေးတင်းမာလာ၍ ဝစစ်သားအားလုံး ရှေ့တန်းထွက်ကုန်ရာ စခန်းလုံခြုံရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေးတာဝန် ဝစစ်သမီးလေးများ ယူထားဂျောင်း သိရသဖြင့် ဝနောက်တန်းအား ကွန်မန်ဒိုကြောင်ကြီးမှ တကိုယ်တော် စီးနင်းတိုက်ခိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်လှမ်းရေး သတင်းတရပ်တွင်ဆိုသည်။
ဂွီ.. ပုံ အပေါ်ပါလား.. အက်ဒစ်လုပ်ကြည့်တော့ ပုံမြင်ရဒယ်.. အဘိုဖြစ်တနီး…
ဒါဆို .. သေဂျာဒယ် ..
ညက ဟိုအဝတ်ရောက် ဂေါင်းရောက်သွားလို့မို့
ဘုန်းနိမ့်ပီး မမျင်ရဒါ …
ကျုပ်ဖြင့် မျင်ရဘာ့ ….
တိုက်ပွဲ ဝင်တော့မည့် ဦးကြောင်ကြီးအတွက်
အပြန် ပန်းကုံးစွပ်ပေးရန် စီစဉ်ထားပါကြောင်းးးးးး
အီတွန့် ဗွမ် တို့ရေနံ တွေ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ တွေ စလွှတ်တဲ့ ရက်စွဲလေး လုပ်ပါဦး
အာရုံတွေများလိုက်တော့ ၊ ဘယ်ချိန် လွှတ်လို့ လွှတ်လိုက်မှန်း မသိလိုက်ရဘူးရယ်
ရသမြောက်အောင်ရေးထားတဲ့ သဒင်းထူးး လေးတွေဂို…
လက်ရှိအခြေနေမှာ ဝတွေကို တိုင်းရင်းသားလို့လက္ခံဘို့ထက်
ဂက်စ်ပိုက်လိုင်းကြီး အလုပ်လုပ်တော့မှာရယ် စစ်အစိုးရရဲ့ထိုးစစ်လိုလို ဘါလိုလိုရယ်
လွှတ်တော်ထဲမှာ စစ်အုပ်စုတွေကို အတည်ပေါက်နဲ့ဟောက်တာရယ်
သူတို့ဟိုဒင်းကို ဥပဒေပြုဘို့ အဆိုတင်သွင်းတာက ဘုန်းကြီးတစ်ပါး
ဒီအကြောင်းကိုမကြေနပ်လို့ အရိုက်ခံရတာက အခြားတစ်ပါး
ကရင်မွန် ကနေ မွန်ဗမာဖြစ်သွားတဲ့ ကျုပ်ရဲ့အကြောင်းတွေကို ပေါင်းပြီးဆက်စပ်လိုက်တော့
ဘယ့်နှယ့် သွသူ ထွားလာတာ ကျုပ်ကို တရားခံဖော်ပါသနည်း …ကိုကိုကြောင်…။
အမှောင်သတင်း သိဖို့ ကြောင်သတင်း ကြည့်စို့
ဒီတခါပိုစုံလာပါလားဟရို့။ မောင်ဂိ့ ပေါင်မုန့်နယ်တာတောင်ပါတေး။ အင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
သူမရင်သား ကြီးထွားနေခြင်းမှာ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားခြင်း မဟုတ်ဟု မင်းသမီး နန်းရတီစိုးမှ အခိုင်အမာ ဆိုသဖြင့်
ကတောက် ဝ ချစ်တမီး တွေ ညင်ရဘူးကွာ။ အားပေးရက်ပါဂျာ